ေက်ာ္တိုင္းမွအက္စ္တိုးနီးယား - ဂျာမန်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာတယ်။
အတူအလုပ္အကိုင္ဆွီဒင်အနေဖြင့်နွေရာသီ၏၁၉၄၀၊အကြမ်းဖက်ဆန္ဒရောက်ရှိ။ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်အစိုးရ၊အတင်းအဓမ္မပြန်လည်၏လူဦးေရအုပ်စုကြီးအဖြစ်၊အခြားဂျာမန်တို့သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများ။ အဓိကအရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ဖျက်သိမ်းရေးအမှန်တကယ်သို့မဟုတ်စွပ်ပြိုင်ဘက်၏အစစ်အစိုးရ၊ဘုရားသခင်၏လူဦးရေ၊အကြပ်အတင်းအဓမ္မ နှင့် ၏သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ အက်ာ္တိုင္း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများအရန်းလူဦးေရအတြက္ထက္အယက်ပြည်ထောင်စုမှ ၁၉၄၀ သည်အထိခေတ်တွင်အသေခံပြီဘယ်ဘက်ခြေနက်ရှိုင်းသောအတွက်သမိုင်းဝင်မှတ်ဉာဏ်၏။ အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထပ်ကောအယက်-ဂျာမန်မ-ကျူးကျော်ပပါ ၂၃။ ၾသဂုတ္လ ၁၉၃၉ ထားဟစ်တလာနှင့်ခေတ်၌မိမိတို့အမြား၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အာရှ နှင့်အတိုက်အကြား။ အက္စ္တိုးလည်းဝင်တိုက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အရှေ့ပိုင်းလန္၊လတ္ဗီးယား၊လစ္သူေပြီး၊ဖင်လန်နိုင်ငံကိုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ ၁၇။ ဇွန် ၁၉၄၀ သိမ်းပိုက်အားဖြင့်အမြစ်ကိုအက္စ္တိုးနီးယား၊လတ္ဗီးယားနှင့်လစ်သူယေး။ သာ ၊နိုင်ငံရေးပါတီသူဌေး၏ဂျပန်၊ ၊ႏွသည္။ အသစ်ဆန္ဒဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခိုင်မာသူတို့အတွက်အတူလွှမ်းမိုးအတင်းအဓမ္မအပြုအမူ။ အရန်းအင္ငံေရးအဖြဲပိတ်ပင်ခဲ့ခဲ့သည်၊အသင်းအဖွဲ့များနှင့်မီဒီယာချိတ်ဆက်နှင့်ရုပ်သေးအစိုးရလက်အောက်ကိုတောင်ပိုင်း၊ယောဟန် ။ အကြမ်းဖက်ဓိကညွှန်ကြားဆန့်ကျင်လက်ရှိနိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး၊စီးပွားရေး၊ယဉ်ကျေးမှုအထက်တန်းလွှာတိုင်းပြည်၏၊ဒါပေမယ့်လည်းဆန့်ကျင်အမျိုးသားအနည်းစုဖြစ်ဂျူးနှင့်နိုင်ငံရေး ၊ရုရှား၊အဘယ်သူသည်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးကိုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်။ စာရင်းများ၏အမည်များ၏အလားအလာကောင်းဆန့်ကျင်-ဥရောပလူမျိုး၊ဥရောပလုံခြုံရေးအသွေးနှင့်အတူ သင့်ဒေသခံဖက်ထားပြီးဖန်တီးခဲ့ကတည်းကအစတကောင်း ၁၉၃၀၏။ ဇွန်လအတွက် ၁၉၄၀၊စုတ်၍ယူ၏အခြေခံပေါ်မှာဤစာရင်းနှင့် မပြုလုပ်ရ။ ၁၇။ ဇူလိုင် ၁၉၄၀၊အဆံုး၏အစလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၊ဂျိုပထခဲ့ရက္ပ်က္မ၊အတူတကွကသူ့ဇနီးမယား ၏အတွင်းပိုင်းသို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ ၃၀။ ဇူလိုင် ၁၉၄၀၊အရန်းသမ္မတ မိသားစုရက္ပ်က္မကိုစာမျက်နှာများတွင်။ အပေါ် ၆။ သြဂုတ်လအတွင်း ၁၉၄၀၊အက္စ္တိုးကြီး၏အစိတ်အပိုင်း။ အဆုံးအားဖြင့် ၁၉၄၀ အယက်ခဲ့ပြီးထက် ၁။ ၀၀၀ စုတ်အဖမ်းခံရပြီးကွပ်မျက်ခံရ။ သိပ်မကြာခင်မှာ၊အကြန္ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဦးဆောင်လွှာ၏ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ အမယ္လိုဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းအတွက်နှင့်အဖြူရုရှား။ နှင့်အတူထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အတည္ျ၏ဗဟိုကော်မတီ၏အ ။ ၁၂၉၉-၅၂၆၁၄။ မေလအတွက် ၁၉၄၁ အ မှဘီပိုလန်၊ယူကရိန်း၊ ရုစ္နှင့်မော်လ်"တရားဝင်"အစီစဉ်။ အည ၁၃။ အပေါ် ၁၄။ ဇွန် ၁၉၄၁ လှိမ့်သာအက္စ္တိုးနီးယား၊လတ္ဗီးယား၊လစ္သူေ၊၊-ပထမအယက်စုလိုက်အပြုံလိုက်က်ာ္တိုင္း။ အရကြိုတင်သတ်မှတ်ထားအကြာလက်နက်ကိုင်ဖမ်းဆီးမိန့်သတိပေးချက်မရှိဘဲသို့မဟုတ် လူင်းတို့၏နေအိမ်များမှ။ အရန်းအ ၁၁။ ၁၀၂ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှင်ဒဏ်ပေး၊သူတို့ပေး၏တစ်နာရီအခမဲ့အချိန်၊အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၏အများဆုံးမိသားစုများကွဲကွာခဲ့ကြမှာပါ။ အတွက်ကားများနှင့်အတူကမ္ပည်းတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးအမျိုးသားတွေကတင္ထားေသာလှည်းနှင့်အတူကမ္ပည်းခအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်၊အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်အတွက်ဆိုဗီယက်ဗန်း။ တဦးတည်းအကြား ၁၄။ နှင့် ၁၇။ ဇွန်လအတွက်၁၉၄၁၊မှတ်တမ်းများအဆိုအရအ
၊၉။ ၁၅၆ လူ၏အတွင်းပိုင်းသို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအတိအကျအရေအတွက်ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခု၏အ ခဲ့ကြပတ်ပတ်လည် ၇။ ၀၀၀ မျိုးသမီးများ၊ကလေးများသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုလူများ၏လေးပုံတစ်ပုံအ အ ၍အောက်ကလေးတဆယ်ခြောက်ယောက်နှစ်အသက်အရွယ်၏။ သုံးထက်ပျမ်းမျှ၊အရန်းအယုဒ၊အဘယ်သူလေးရာရှိကြ၏ရက္ပ်က္မမှလုိုက်ပတ်ပတ်လည် ၁၀၏ယခင်ဂျူးလူဦးရေ၏ဆိုက်ရောက်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြ။ ၃၀။ ဇွန်လ ၁။ ဇူလိုင် ၁၉၄၁ က်ာ္တိုင္းလုပ်ရပ်အရပျကိုယူရန်အပေါ်အနောက်နိုင်ငံရန်း။ တယောက်တည်း၊၆၅၄ေနထိုင္သူ အစီအမံအသားကောင်များ။ အဆုံးအားဖြင့်၁၉၄၁.
ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်အကျဉ်းထောင်စခန်း၊ယောက်ျားမှတင်ဆက်ကြသည်ကော်မတီ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ရာနှင့်ချီ၍ဆီးနှင့်ပစ်ခတ်ကြ။ အများစုကအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးအရက္ပ်က္မအ နှင့်အ ၏၊ဘယ်မှာအများအပြားသေဆုံး၏အဟာရချို့တဲ့မှု၊အအေးနှင့်အတင်းအလုပ္သ။ အဆိုအရန်းအချက်အလက်၊၄။ ၃၁၁ အရက္ပ်က္မအထားပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊အရေအ ၁၉၄၁ အားဖြင့်ဆိုဗီယက်အာဏာပိုင်ခဲ့ရက္ပ်က္မမွအက္စ္တိုးနီးယား၊လတ္ဗီးယား၊လစ္သူေ၊ပိုလန်နှင့် ၉၅။ ၀၀၀။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင်ဂျာမန် သိမ်းပိုက်၏သင်တန်းတွင် ဒီဆန့်ကျင်စစ်ပွဲအမြစ်ကိုဖော်ပြ။ ဂျာမန်တပ်တည်ထောင်တဲ့စစ်အစိုးရ၏အကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်စွပ်ယက်ရာ္ဘင္၊ပြိုင်ဘက်၏အလုပ္အကိုင္၊ယုဒ၊ရုရှား၊ရိုးမား၊နှင့်အခြားအုပ်စုများ။ အတူဖွယ်အနိုင်ယူ၏ဂျာမနီတွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊စစ်တပ်များသည်ပြန်လည်သိမ်းပိုက် ၁၉၄၄ တစ်ခုလုံး၏နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊စတင် နှင့်စုစည်းပြီး၎င်းတို့၏။ ၁၅။ သြဂုတ်လတွင် ၁၉၄၅၊ဆိုဗီယက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရက္ပ်က္မ ၄၀၇ လူၼ အတွက်မြောက်-အနောက်ရုရှားနိုင်ငံ၏၊သူတို့ထဲကအများစုဟာဘောလ်ဂျာမန်နွယ်ဖွား။ လေး၁၉၄၆၊ကိုဗဟိုကော်မတီ၏ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ၊ဒါကြောင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသံကျယ်ထွက်ကိုရောက်စေဖို့တိုက်အခံကွန်မြူ၏အစစ်အစိုးရနှင့်တိုင်းပြည်များထဲက။.
Siðferðilega líffræðilega undirstöður þekkingu - Sérfræðing
© 2021 ဂျာမန်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာတယ်။